ओबामाको बोलीमा रुखोपन छ। डिबेट हरुमा हंसिलो बोली गरेर बोलेको त्यती देख्दिन, तर हिलारीमा शालीनता छ र प्रत्यक प्रश्नको जवाफ शान्तपुर्ण रुपमा दिएको देख्छु। सैद्धान्तीक कुराहरुमा त्यती भिन्नत भएजस्तो त लागेन। मेरो बिचारमा हिलारीको बिजयले अंमेरीकाले सही नेत्रित्व पाउने छ।
हुन त म जस्तो बिदेशी मान्छेलाई कागलाई बेल पक्यो हर्स न बिस्मात हनु पर्ने हो- अजयको कुरा सटिक लाग्यो। म पनि बुस र केरीको रिजल्ट हुंदा होमवर्क नगरी रिजल्ट हेरेर बसेको थिए। गजबको हुंदो रहेछ यो चिज।
मेरो बिचारमा ओबामा ले जित्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
ओबामा बनको कांडा हुन तिनलाइ तिखार्नु पर्दैन, तिनले अमेरीकालाइ अगाडी लान्छन कि? तर हिलारी संग अनुभव त पक्कै छ तर तिनको अनिभव सिमीत हो कि।
ओबामा र क्लिन्टनमा क्लिन्टन अली भलाद्मी र ओबामा चाँही भाषणकलामा निपुण छन जस्तो लाग्छ । अब तेस्तै हो, बोल्न र गर्न अली फरक होला ।
CNN ले केही समय पहिले Obama को पुर्ख्योउली गाउ को रिपोर्ट दिएको थियो । उनी बाहेक उनको पुर्ख्योउली परिवारका सबै जना मुस्लिम रहेछन। उनको नाम बाराक हुसैन ओबामा रहेछ । ओबामा ले जिते भने एउटा अफ्रिकन मुसल्मानले अमेरिकाको राष्ट्रपती पद पाउनु वाह्य दुनियाँको लागि चाँही पक्कै interesting हुनेछ ।
हिलारी क्लिन्टनको शासन खासै बिल क्लिन्टनको भन्दा फरक नहोला कि? बिदेश मामिलामा सुस्त बसेर आन्तरिक अर्थतन्त्र लाई दर्हो बनाउने तिर क्लिन्टनको ध्यान जान्छहोला ।
ओबामाले जिते भने पक्कै पनि उनी चर्चा को राजनीतिमा आउन चाहन्छन र त्यस्ले केही ठुलो (नकारत्मक वा सकारात्मक्) परिवर्तन ल्याउला कि !
malai ta obama lay jitay hunthiyo... young blood cha.. kehi garcha ki kale lay